Saturday November 28, 2020 - 08:01:16 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warbaahinta Mareykanka ayaa daaha ka fayday heybta sarkaal sare oo katirsanaa CIA-da kaasi oo isbuucii lasoo dhaafay udhintay dhaawac kasoo gaaray weerar Al Shabaab ay ka fulisay Sh/hoose.
Michael Goodboe oo 54 sana jir ahaa islamarkaana hore uga mid ahaa ciidamada Mareykanka ee loo yaqaan Navy SEAL ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay weerar horraantii bishan Novembar ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho.
Sida warbixinadu sheegayaan Michael Goodboe ayay CIA-du udirtay dalka Soomaaliya si uu usoo fuliyo weeraro ka dhan ah Shabaabul Mujaahidiin balse Jaxiimo ayaa loo diray isagoo aan gaarin hadafkiisa.
Saraakiisha sirdoonka Mareykanka waxay sheegeen in Michael Goodboe uu ahaa sarkaalkii ugu sarreeyay ee lagu dilo dalka Soomaaliya tan sanaddii 1993-dii xiligaas oo askar iyo saraakiil American ah lagu dilay dagaalkii ku caanbaxay magaca "Black Hawk Down".
Sarkaalkan American-ka oo dhimashadiisa la shaaciyay dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay ayaa larumeysanyahay in lagu dilay weerar istish-haadi ah oo Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay ka fulisay deegaanka Gandershe ee Sh/hoose xilligaas oo ciidamo American ah ay deegaanka ku tageen weerar habeen dheelmad ah.
Dhinaca kale sii haya xilka wasiirka difaaca Mareykanka ayaa booqasho dhuumasho ah ku tagay magaalada Muqdisho.
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidanka Mareykanka qaaradda Afrika ayaa lagu sheegay in Christopher Miller uu garoonka diyaaradaha Muqdisho kula kulmay askarta iyo saraakiisha American-ka ah ee halkaas ku sugan.
Socdaalka wasiirka difaaca Mareykanka ayaa imaanaya xilli Donald Trump uu qorshaynayo in dhammaan ciidamadiisa oo gaaraya 700 oo askari uu kala baxo Soomaaliya.